Shiinaha Qiimaha Tartanka HIEMT EMS jirka isku xira mashiinka mishiinka kiciyaha kiciya miisaanka mishiinka khafiifinta iibinta iibiyaha Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | LaserTell
Waa maxay HI-EMT?
Qalabka HI-EMT oo loogu talagalay ujeedo bilic leh, oo leh 2 (laba) codsadeyaal leh xoog sare. Waa tiknoolajiyad goos goos ah oo ku jirta qaabdhismeedka jirka ee aan waxyeellada lahayn, maadaama aysan ahayn oo keliya gubista baruurta, laakiin sidoo kale waxay dhiseysaa Muruq.
Intaa waxaa sii dheer, daaweyntu uma baahna suuxdin, jeexitaan, ama raaxo la'aan. Xaqiiqdii, bukaanku waxay awoodaan inay dib u fadhiistaan ​​oo ay nastaan, halka qalabku sameeyo wax u dhigma in ka badan 20,000 xoqan oo aan xanuun lahayn ama squats.
Teknolojiyada Kicinta Muruqyada Korontada ee EMS
Nidaamka Howlgalka Cufnaanta Dheeriga ah ee Diirada elektromagnetic
Luqadda Ingiriisiga iyo kuwa kale
Gacanka 2 Gacan
Waxyaabaha ABS + ahama steel
Danab 110V / 220V 50-60Hz
Cabbirka baakadka 71 * 61 * 112CM
Cilmi-baarista caafimaad waxay muujineysaa in hal daaweyn ka dib, ay si wax ku ool ah u kordhin karto 16% murqaha oo ay u yareyn karto 19% dufanka isla waqtigaas. Jimicsiga muruqyada caloosha, qaabeynta joodariga khafiifka ah / jimicsiga muruqyada sinta, abuurista miskaha fiska / jimicsiga muruqyada muruqyada caloosha, iyo Qaabeynta xarigga meeriska.
Wanaajinta muruqyada caloosha oo dabacsan sababo la xiriira dabada caloosha, iyo qaabeynta joodariga khaaska ah Waxay si gaar ah ugu habboon tahay hooyooyinka leh wareega caloosha oo kordhay iyo caloosha dabacsan oo kala soocda foosha abdominis foosha kadib.
Si loo kiciyo cusboonaysiinta kolajka ee muruqyada sagxada miskaha ee hoose, adkee murqaha muruqyada sagxada miskaha ee jilicsan, xalliya dhibaatada kaadida oo soo galeysa iyo ceshad la'aanta, iyo si aan toos ahayn loogu guuleysto saameynta adkeynta siilka.
Jimicsigu wuxuu xoojiyaa muruqyada asaasiga ah, oo ay kujiraan caloosha aasaasiga weyn (rectusminor core Core muruqyada muruqyada waxay ilaalin karaan lafdhabarta, waxay ilaalin karaan xasiloonida jirku, waxay ilaalin karaan korteabdominis dibedda, uur-ku-jirta, abdominis dib-u-dhac ah) yareeyo fursadda dhaawaca, u siiso taageero qaab-dhismeedka jirka oo dhan, iyo in la abuuro jir da 'yar.
Hore: 2020 ikhtiraaca cusub ee xoojinta muruqyada oo yareynaya quruxda caatada ah ee jilicsan ee mashiinka HIMET
Xiga: Anti-gabowga Wrinkle Remover Waji Qaadista Radar Line RF Ice monopolar rf maqaarka oo adkeynaya
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Module Laser 808, 3 Gudaha 1 Ipl, Ipl Xenon Flash Siraaj, Laser Epilator Ipl, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Diode Timo Goynta Laser Guriga, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha